‘ताकलुङको मधुरिमा’ : सुन्दर लघु काव्य [कृति समीक्षा] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘ताकलुङको मधुरिमा’ : सुन्दर लघु काव्य [कृति समीक्षा]
२०७७ फाल्गुन १, शनिबार ११:११ गते
विक्रम संवत् २०७७ कार्तिक ७ गतेका दिन चितवनका स्रष्टा केदारनाथ खनाल सतहत्तरौँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा यहाँका साहित्यिक संघसंस्था र साहित्यकारहरुको भेलाले अमृतोत्सव मनाई उहाँलाई अभिनन्दनका साथ सम्मान गरेको छ । यसै अवसरमा केदारनाथ खनाल : व्यक्ति कृति अमृतोत्सव विशेष प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यको भण्डारमा अर्को एक विशिष्ट कृति थपिएको छ । कवि खनालले अर्को सानो तर गहकिलो लघु काव्य ‘ताकलुङको मधुरिमा’ लेखेर हामीलाई गुन लगाउनुभएको छ । यो पुस्तकको आकार सानै छ, तर पनि यसको भित्री, बाहिरी आवरण र जन्मभूमिप्रति देखाइएको स्नेह र सद्भावले यसको उचाइलाई चुल्याएको छ । केदारनाथ खनाल : व्यक्ति कृति र यो लघु काव्य काव्यकारकै हातबाट मैले पाएँ । आकारमा सानो भएकोले पनि मैले यो लघु काव्य एकै क्षणमा पढी सिध्याएँ । पढ्दै जाँदा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको ‘गौरी’ खण्डकाव्यजस्तै यो पनि वजनदार छ भन्नुमा कुनै दुईमत छैन । काव्यको सुवासले म पनि जन्मभूमिप्रति द्रवीभूत भएँ । मेरो जन्मभूमि मनकामना भेँडाटारी र ताकलुङ गाउँ वक्रेश्वर डाँडापारि, डाँडावारि पर्दछ । त्यसैले पनि यो काव्यले मेरो मन छोएको होला ।
‘ताकलुङको मधुरिमा’ पढिसिध्याएपछि यसबारे मेरा मनमा उठेका तरङ्गहरुलाई लिपिबद्ध गरेर काव्यकारलाई भेटी चढाउनु मन लाग्यो । पढ्दै जाँदा जे पाएँ, जे देखेँ त्यो लेखेको छु । समालोचनाको तराजुमा राखेर तौलने सामथ्र्य त ममा कहाँ छ र ! यस काव्यभित्र पसेर शुभकामना, भूमिकामार्फत विद्वान्हरुले काव्यरसको धारा बगाएर पाठकलाई रसास्वादन गराउनुभएको छ । केदारनाथ खनालको असली कर्मक्षेत्र चितवन भएकाले शिक्षा र साहित्यको क्षेत्रमा उहाँको योगदान अनुकरणीय त छँदैछ, जन्मथलो गोरखामा पनि हरि सांस्कृतिक केन्द्रसँग आबद्ध रहेर नेपाली साहित्यको उन्नयनमा अनवरत लागिरहनुभएको छ । गोरखाकै एउटा गाउँ ताकलुङमा जन्मेर उहाँले जन्मभूमिप्रति स्नेह देखाई काव्य रचना गर्नुभएको यस कृतिमा हरि सांस्कृतिक केन्द्रका संरक्षक एवम् केन्द्रका संस्थापक वरिष्ठ साहित्यकार स्व. राजेश्वर देवकोटाका सुपुत्र ईश्वरचन्द्र देवकोटाको शुभकामना छापिएको छ । शक्ति वल्लभ अर्याल, उदयानन्द अर्याल, पूर्णप्रसाद ब्राह्मण, मदन पुरस्कार विजेता विनोदप्रसाद धिताल, राजेश्वर देवकोटा, छन्दोबद्ध कवि नेत्रमणि आचार्य, संस्कृत दर्शनशास्त्रका धुरन्धर विद्वान् प्रा. शिवहरि मरहट्ठा र अन्य कविहरुको हवाला दिँदै प्राडा. नारायणप्रसाद खनालले यस काव्यको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ । नेपाली साहित्यका विशिष्ट छन्देली कवि गोविन्दराज विनोदीले कविताबाटै प्रदान गरेको शुभ सम्मतिमा यस लघु काव्यको मर्म र धर्म मुखरित भएको छ । कवि विजय न्यौपाने ताकलुङबाट चितवन सरेको सन्दर्भलाई जोडेर यसरी व्यक्त गर्छन् :
होलिन् ती एक्ली आमा
बूढो वृक्षसरी कठै
पाकेर बीउझैँ छरिँदै सबै
दशवटा कृतिहरु प्रकाशित गरिसक्नुभएका काव्यकार केदारनाथ खनालको यो ‘ताकलुङको मधुरिमा’ एघारौँ कृति हो । यो कृतिलाई उहाँले आमुख, शुभारम्भ, मेरो ताकलुङ, पुर्खा : ताकलुङ आगमन र अन्तिम पृष्ठमा धन्यवाद ज्ञापन गरेर काव्य समापन गर्नुभएको छ । ‘बनी अक्षर आफैँमा पोखिएको छ यो मन, म आफ्नै गाउँको आज काव्यमा गर्छु वर्णन’ भन्दै शुभारम्भमा उहाँले वक्रेश्वर महादेव, सिद्धि गणेश, मनकामना, गोरखनाथ, अर्लाङ्दी, चन्नेनी, द्यौराली, जलदेवी, कुलदेवताहरुलाई सम्झेर लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता मिलोस् भनी पुकार्नुभएको छ । यो स्तुति पूर्वीय काव्य दर्शनमा गरिने अभ्यर्थना हो र लघु काव्य नै भए पनि यसमा उहाँले परम्परा धान्नुभएको छ । ‘मेरो ताकलुङ’ शीर्षकमा कविले आफू जन्मेको गाउँठाउँलाई सम्झेर त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, जात्रा, जात्रामा गाइने गीतहरु, देवीदेवताका थान, चाडपर्वहरुसँग आत्मसात् गर्दै देउराली छापको घाँटु, बराल थोकको पाउँदुरे, मगरगाउँको चुड्का र झ्याउरे, चालिसे गाउँको बालुन, नेवार हटियाको लाखे नाच सम्झेर भावुक बन्न पुग्नुहुन्छ । त्यसबेला पहाडी भेगमा जब बालीनाली लगाइसकेर शरद ऋतुको आगमन हुन्छ चाडपर्वहरु सुरू हुन्छन् । देवीथानहरुमा जात्रा लाग्छ । भरपूर मनोरञ्जनका निम्ति तन्नेरी–तरूनीहरु जाग्राम बस्छन्, बात गर्दै, खाँदैपिउँदै, नाच्दै, मायापिरती बसाउँदै जीवनसाथी–संगिनी खोज्ने र रोज्नेसमेत हुन्छ त्यहाँ । अर्लाङ्दी, हिमला, भोर्लाझ्याङ, मनकामनाको जात्रा त्यस भेगका प्रख्यात जात्राहरु हुन् । यस काव्यका कवि यी जात्रामा रात बसेका, नाचेका, गाएका, खाएका मान्छे हुन् । त्यसैले, आजभोलि यो लोकसंस्कृति लोप हुँदै जाँदा उनलाई चिन्ता लागेको छ । उर्वरभूमि ठेउवाटार ताकलुङको बेँसी हो । अन्नबाली, पशुपालन, घाँसदाउरा यतैबाट परिपूर्ति हुने हुँदा कविको सम्झनामा यो टार बारम्बार आइरहन्छ । त्यहाँको फर्से, डुमराईजस्ता अनेकन थरीका फलफूलका स्वाद उनको जिब्रोले अझै भुल्न सकेको छैन । यसरी ताकलुङ र त्यसको सेरोफेरोमा हुने सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक वैभव, खोलाखोल्सी, पण्डित चौतारो, देउराली छाप र लेकको डाँडो सबैसबै नै कविको मानसपटलमा झुल्किरहन्छन् । तिनको झझल्कोमा कविमन रमाउँछ ।
मानिसमा जतिजति उमेरले शिखर चुम्न थाल्छ त्यसबेला अतीतका दृश्यहरु मन र मस्तिष्कमा सलबलाउन थाल्छन् । तिनै वस्तुहरु प्रिय हुन्छन् । अहिले केदारनाथ खनाललाई ताकलुङ र ठेउवाटारको गामबेँसी, धारो–पँधेरो, आफ्नै बारीमा फलेका र पाकेका केरा, सुन्तला, ज्यामिर, निबुवा, बार्दली झिकेको दुईतले पुख्र्यौली घर सम्झनामा आइरहँदो हो । बन्दीपुरका भट्टराई थरका काकु पण्डितलाई घरैमा राखेर गुरूकुलजस्तै गरी पाठशाला चलाएको, सँगै पढेका, सँगै खाएका ती दिन सम्झँदा आनन्द आउँदैन र ! यिनै बिम्बहरुमा रमाउँदै आफ्नै खुसीका दिनहरु कविले काव्यमा उतारेका छन् । ताकलुङका वनपाखा र घरबारीमा फुल्ने धेरैथरीका वनफूलहरु टिपेर एउटै धागोमा उनिएको सुगन्धित माला हो यो लघुकाव्य ताकलुङको मधुरिमा ।
लघु काव्यको अन्तिम सर्ग भनौँ वा शीर्षक रहेको छ– पुर्खा : ताकलुङ आगमन । अर्घाखाँचीको खन भन्ने स्थानबाट आफ्ना पुर्खा गोरखा आएका हुन् र गोरखा राज्य सञ्चालनमा राजाको निकट रहेर सहयोग पु¥याएका हुन्, त्यसबापत सदानन्दका छोरा श्रीकृष्णले बिर्तासमेत पाएका हुन् भन्ने कुरा पनि यसमा रहेको छ । त्यसपछि खनालका धेरै शाखा सन्तान वृद्धि हुँदै गए र भोगप्रसाद खनालका चार भाइ छोरामध्ये जेठा छोरा यस काव्यका रचयिता केदारनाथ खनाल हुन् । संस्कृत, अंकगणित, चिठी, तमसुक पढाउनका लागि बन्दीपुरका काकु पण्डित झिकाएर आफ्नै घरमा पाठशाला स्थापना गरी अध्यापन कार्य गरेको र यस काव्यका रचनाकारको प्रारम्भिक शिक्षा पनि यसै पाठशालाबाट सुरू भएको देखिन्छ । आफ्ना पुराना सहपाठीसँग खेलेको, पढेको स्मरण गरेका छन् कविले काव्यका पंक्तिहरुमा । साउन महिनामा कुकुरडाइनो, कुरिलो, भलायो, अम्बा, निबुवा, बिमिराका जोले दाना बटुलेर पूजा गरी राँको बालेर लुतो फालेको सम्झना गरिएको छ । बाहुनथोक, तेर्सेगाउँ, डुँडेगैरीतिर बाल्यकालमा उफ्रँदै, बुर्कुसी मार्दै खेलेको र लंगुरे बानर देखेर डरले कुलेलम ठोकेको स्मृति ताजै छ कविलाई । कुन साथीभाइहरु कस्ता स्वभावका थिए भन्नेसमेत हँसेउलो ठडेउलो पारामा काव्यका पंक्तिहरु बोलिरहेछन् । जीवनको उर्वर समयमा अनगिन्ती आशा र विश्वास बोकेर दिन प्रतिदिन विकासको अग्रगतिमा फड्को मारिरहेको समथर भूमि चितवनमा काव्यकार पहाडी गाउँ ताकलुङको घरबार छोडेर बेँसी झर्छन् । यहाँको मलिलो माटो, फराकिलो बाटो, घना जंगल र विकासको तीव्र गतिले परिवर्तित चितवनमा कवि रमाउँछन् । आफ्ना सबै खाले प्रगतिका सूचकहरु यहीँ देख्छन् । यहीँको माटोलाई चुम्छन् । शिक्षा र साहित्यको बाटो रोज्छन् । अनवरत यसैमा लागिरहन्छन् । जन्मभूमि ताकलुङलाई सम्झन्छन्, अघि लेख्छन्–
जहाँ जाऊँ म यो
मेरो मन–मस्तिष्कमा सदा
बिम्ब ताकलुङको बस्छ
स्वप्न जागृतमा सदा ।